Creative Outlier Pro, endri-javatra premium ambanin'ny €90 | iPhone News
Creative Outlier Pro, endri-javatra premium latsaky ny €90
louis padilla | 23/04/2022 10:00 | Fitaovana IPhone, maro
Nosedrainay ny écouteur vaovao an'ny Creative, ny maodely Outlier Pro izay amin'ny latsaky ny €90 dia manolotra antsika ireo fiasa natokana ho an'ny modely lafo vidy kokoa.
Ny Creative dia manolotra antsika ny Outlier Pro vaovao miaraka amin'ny fanafoanana ny feo mavitrika hybrid, ny fahaleovan-tena hatramin'ny 60 ora, ny fiampangana tsy misy tariby, ny fanamarinana IPX5 ary ny feo tena voalanjalanja mampitovy azy. Raha atambatra daholo ireo asa rehetra ireo ary ampiana fa samy manana ny naoty ambony ny tsirairay amin'izy ireo, sarotra ny mino fa ambany ny €90 ny vidiny, saingy soa ihany fa izay no marina. Efa nosedrainay ary omenay anao ny hevitray.
2 Fanafoanana ny tabataba hybrid
3 Fampiharana tena feno
4 Kalitao feo
Rehefa manokatra ny boaty, ny zavatra voalohany hitanay dia ny vata fampangatsiahana izay miasa ihany koa mba hitazonana ny écouteur ary hampiasaina foana. Ny raharaha dia manana a vita amin'ny metaly izay manome endrika hafa noho ny boaty plastika mahazatra. Ny fahatsapana mikasika dia tena tsara ary na dia tranga lehibe kokoa noho ny ankamaroan'ny ankamaroany aza, ny endrika boribory sy lava dia mahatonga azy ho mora entina ao anaty paosy.
Any ivelany dia misy telo LED izay tsy manondro ny sata fiampangana ny écouteur sy ny fonony. Raha toa ka miala amin'ny mena (charging) mankany amin'ny maitso (charge feno) fotsiny ny écouteur, dia misy loko telo (maitso, volomboasary ary mena) ny LED afovoany izay manondro ny fonony izay manondro ny bateria tavela ao anatiny. Rehefa mampandoa ny carte dia ny loko mena dia manondro ny fiampangana ary ny loko maitso dia manondro fa feno ny fiampangana. Raha te hahita ny LED ianao dia tsy maintsy manokatra ny raharaha, izay mikisaka amin'ny sisiny mampiseho ny écouteur.
Ao amin'ny boaty dia manana ihany koa izahay soso-kevitra roa sosona silicone (miampy ireo efa tonga amin'ny écouteur) mba hampiasa ireo izay mety indrindra amin'ny sofina. Tafiditra ao koa ny tariby fiampangana (USB-A mankany USB-C), ny hany tsy hitanay dia ny charger, fa afaka mampiasa izay anananay ao an-trano na seranan-tsambo amin'ny solosainay izahay.
ny specs amin'ireto écouteur an-tsofina ireto dia tena mahagaga raha jerena ny vidiny:
Fifandraisana Bluetooth 5.2
Hybrid Active Noise Fanafoanana
60 ora ny fahaleovan-tena tanteraka (40 ora miaraka amin'ny fanafoanana ny tabataba mavitrika)
15 ora amin'ny fiampangana tokana (10 ora miaraka amin'ny fanafoanana ny tabataba mavitrika)
Mpamily mifono graphene
Fanafoanana ny tabataba hybrid
Hatramin'izao dia mety efa naheno karazana fanafoanana tabataba roa ianao: mavitrika sy tsy mihetsika. Ny passive dia azo amin'ny alàlan'ny fitokanana ara-batana avy any ivelany, na amin'ny fampiasana écouteur izay manarona tanteraka ny sofinao na amin'ny alàlan'ny plugs silikônika izay manasaraka ny lakan-tsofina. Ny fanafoanana mavitrika dia vita amin'ny alàlan'ny mikrofonina hita ao amin'ny headset izay maka tabataba ivelany ary manafoana izany. Ireo mikrô ireo dia mety ho eo ivelan'ny sofina, izay manome fanafoanana tsara kokoa fa matetika misy fiantraikany amin'ny feo henonao, na ao anatiny, izay matetika manome feo tsara kokoa fa ny fanafoanana dia tsy dia tsara loatra.
La Ny fanafoanana ny tabataba hybride dia tratra amin'ny fampifangaroana mikrô eo ivelany sy ao anatiny, izay atambatrao ny tsara indrindra amin'ireo safidy roa ireo. Ankoatr'izay, tsy maintsy ampiana ny fanafoanana passive noho ny plugs silicone. Ny vokatra farany dia fanafoanana feo tsara, tsy ny tsara indrindra amin'ny tsena, fa eny ny tsara indrindra nandramako tamin'ny écouteur an'io fizarana io, ary ambonin'izany rehetra izany ny tena tiako indrindra dia ny feo henonao dia zara raha misy fiantraikany amin'ny fampandehanana na ny fanafoanana ny fanafoanana, zavatra mitranga matetika amin'ny écouteur amin'ity sandan'ny vidiny ity rehefa misy fanafoanana mavitrika (zavatra tsy mahazatra amin'izao fotoana izao).
Ny fomba mangarahara dia tsy dia mahafa-po noho ny fanafoanana ny tabataba. Ny kalitaon'ny feo azonao avy any ivelany dia tsy mazava, ary na ny fametrahana azy ho amin'ny ambaratonga ambony indrindra aza indraindray dia sarotra ny mandre tsara raha misy miresaka aminao. Azonao atao ny mifamadika eo anelanelan'ireo maody telo (mangarahara, fanafoanana, mahazatra) amin'ny fampiasana ny fanaraha-maso mikasika izany dia eo amin'ny lafiny ivelany amin'ny écouteur. Ary azonao atao ny mandamina ny haavon'ny fomba mangarahara sy ny fanafoanana ny tabataba mavitrika amin'ny fampiharana izay misy Android y iOS.
Fampiharana tena feno
Ny fampiharana Creative ho an'ny iOS dia ahafahanao manamboatra endri-javatra maro amin'ny écouteur. Tsy dia mahazatra loatra amin'ny écouteur amin'izao vidiny izao ny manana haavo fanamboarana be dia be. Azonao atao ny manova ny fampitoviana ny feo, mba hanomezana lanja bebe kokoa ny bass na ny mifanohitra amin'izany. Azonao atao koa ny manova ny haavon'ny fanafoanana ny tabataba sy ny fomba mangarahara, araka ny efa nolazainay taminao.
hafa Ny safidy fanamboarana dia ahitana fanaraha-maso mikasika. Miaraka amin'ny safidy samihafa ho an'ny sofina havanana sy ankavia, afaka mampiakatra sy midina ny feo, manetsika ny fanafoanana ny tabataba na ny maody mangarahara, miato na manohy ny playback, na manomboka ny mpanampy virtoaly (Siri amin'ny iPhone sy Google Assistant amin'ny Android). Misy safidy maro hanamboarana ny fanaraha-maso, ary tena ankasitrahana izany.
Ny teboka manan-danja indrindra amin'ny headset, ary ireo Creative Outlier Pro ireo dia mahazo naoty tsara. Raha tsy mikasika ny fampitoviana, dia tsikaritra ny feo miaraka amin'ny fanjakazakan'ny bass, tsy misy zavatra tafahoatra loatra, fa miharihary. Raha tsy tianao dia azonao ovaina ny fampitoviana, na raha heverinao fa mbola tsy ampy izy ireo, dia manana toerana hampitomboana azy ireo ianao. Tiako manokana ny feo atolony amin'ny alàlan'ny default, manana haavon'ny feo tsara izy, ary samy hafa tsara ny zavamaneno sy ny feo. Manakaiky ny kalitaon'ny écouteur hafa izay mitentina avo roa heny ny feony.
Manome antsika ny feo ny Creative Holographic SXFi, zavatra azo ampitoviana amin'ny "Dolby Atmos" an'ny Apple Music miaraka amin'ny AirPods Pro. Noho izany dia manana fampiharana manokana tsy maintsy alainay izahay (rohy), ary mandalo ihany koa ny dingana fanamboarana somary manahirana, fa ny vokatra farany dia mendrika izany. Ny mampalahelo dia tsy miasa afa-tsy amin'ny mozika voatahiry ao amin'ny fitaovanao izy io, tsy mifanaraka amin'ny serivisy streaming, noho izany dia voafetra ny fampiasana azy amin'ny mikrô.
Ny Creative Outlier Pro dia miavaka amin'ny fahaleovantenany tena tsara, manana fanafoanana tabataba mavitrika mihoatra noho ny azo ekena ary feo somary tsara ho an'ny sandan'ny vidin'ny hetsika. Ny rindranasa misy safidy maro amin'ny fanitsiana dia mameno ny setriny izay sanda amin'ny vola no safidy tsara indrindra ho an'ireo izay mitady écouteur tsara miaraka amin'ny fiasa premium eo ambanin'ny €90. Azonao atao ny mividy izany amin'ny €89,99 amin'ny tranokala Creative (rohy) ary raha mampiasa ny kaody fihenam-bidy OUTLIERPRO ianao dia hanana fihenam-bidy 25%. miaraka amin'izay tavela amin'ny vidiny mahavariana.
Navoaka tamin'ny: 23 Aprily 2022
Fanovana farany: 23 Aprily 2022
Fanafoanana ny tabataba mavitrika tsara
Fampiharana misy safidy fanamboarana
Kalitaon'ny feo tsara
Tsy misy sofina detection izay mampiato ny playback rehefa esorina
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fitaovana IPhone » Creative Outlier Pro, endri-javatra premium latsaky ny €90
Ny iPhone 14 Pro dia hanana endrika boribory kokoa noho ny iPhone 13
Raiso ny fanamby ho an'ny Andron'ny Tany 2022 edisiona voafetra anio